कोभिड -१ var भेरियन्ट बढ्दै जाँदा, हवाईजहाजमा अनुहार मास्क परिवर्तन हुँदैछन्
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » एयरलाइन्स » कोभिड -१ var भेरियन्ट बढ्दै जाँदा, हवाईजहाजमा अनुहार मास्क परिवर्तन हुँदैछन्
एयरलाइन्स • हवाई अड्डा • उड्डयन • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • स्वास्थ्य समाचार • समाचार • सुरक्षा • पर्यटन • यातायात • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज • विभिन्न समाचार
हवाई जहाज मा अनुहार मास्क
सोच्नुहोस् कि तपाइँ तपाइँको विमान मा चढ्न को लागी तैयार हुनुहुन्छ किनकि तपाइँ मा तपाइँको अनुहार मास्क छ? होल्ड, तपाइँ एक आश्चर्य को लागी हुन सक्छ। लामो उडानहरुमा अनुहार मास्क संग उड्न असहज छ। केहि यात्रुहरु प्राय आफ्नो शौचालय मा घण्टा बिताउँछन् मात्र आफ्नो मास्क लगाउन बाट बच्न। डेल्टा भेरियन्टको साथ अनुहार मास्क लगाउन प्रतिबन्धित नयाँ COVID-19 केसहरु को लागी प्रतिबन्ध लगाउने आशा छैन।
के तपाइँलाई थाहा छ कि प्रत्येक एयरलाइन्स मा एक अनुहार मास्क लगाउनु पर्छ मात्र होइन तर यो पनि अनुहार मास्क कस्तो प्रकार को एक उडान मा जब लगाउनु पर्छ निर्धारण गर्न को लागी क्षमता छ?
के तपाइँ एक N95 र एक कपडा मास्क बनाम एक भल्भ मुक्त FFP2 को बिचमा फरक थाहा छ?
अधिकांश मानिसहरु कपडा अनुहार मास्क लगाउँछन्, तेसैले तपाइँ के लगाउनुहुन्छ यदि कपडा बाट बनेको मास्क प्रतिबन्धित छ?
धेरै भन्दा धेरै एयरलाइन्सहरु कपडा बाट बनेको मास्क मा प्रतिबन्ध लगाउन शुरू गरीरहेका छन्, उनीहरु कोभिड १ of को फैलावट को बिरुद्ध गुणस्तरीय बाधा नभएको भन्दै, विशेष गरी डेल्टा को कारण दुनिया भर मा हरेक दिन नयाँ केसहरु को चरम उदय को प्रकाश मा। रूपहरु। उनीहरुलाई बरु सर्जिकल मास्क, N19 मास्क, भल्भ-रहित FFP95 मास्क, वा FFP2 रेस्पिरेटर मास्क चाहिन्छ।
अहिले सम्म, लुफ्थान्सा, एयर फ्रान्स, LATAM, र Finnair कपडा अनुहार मास्क साथै मास्क जसमा निकास भल्भहरु लाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसकाे बारेमा साेच। निकास संग एक मास्क निकास संग एक कार जस्तै हो। यो चालक को लागी ठीक छ (वा यो मामला मा पहनने), तर त्यो निकास बाहिर सबै को बारे मा? मास्क मास्क होइन मास्क हैन।
यस हप्ता, फिनएयर भर्खरै क्यारियर बन्यो कपडा अनुहार मास्क जहाजमा, केवल सर्जिकल मास्क, भल्भ-मुक्त FFP2 वा FFP3 श्वसन मास्क, र N95 मास्क स्वीकार गर्दै, कम्पनीले ट्वीट गरे।
एयरलाइन्सलाई मेडिकल मास्क चाहिन्छ - कम्तिमा ३ तह मोटी - एयर फ्रान्स र लुफ्थान्सा हुन्। LATAM ले KN3 र N95 मास्कलाई पनि अनुमति दिनेछ। र एक अतिरिक्त सावधानी को रूप मा, यात्रुहरु लीमा मा जडान को लागी, उनीहरु डबल र अर्को मास्क मा जोड्नु पर्छ। यसको कारण यो हो कि अहिले पेरु को कोभिड -१ death बाट मृत्यु दर संसारमा सबैभन्दा धेरै छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका मा, धेरै जसो एयरलाइन्स कपडा अनुहार मास्क को अनुमति दिन्छन् तर बन्दाना, स्कार्फ, स्की मास्क, gaiters, balaclavas, कुनै पनी प्रकार को प्वाल वा टुक्रा संग मास्क, निकास वाल्व संग मास्क, वा कपडा मास्क जस्तै अन्य प्रकार को अनुहार कभरिंग प्रतिबन्ध लगाएको छ। यदि तिनीहरू केवल सामग्री को एक एकल तह बाट बनेका छन्। केहि मानिसहरु प्लास्टिक अनुहार ढाल लगाउन मा छन्, तर युनाइटेड एयरलाइन्स को मामला मा, उनीहरु भन्छन् कि यो पर्याप्त कवरेज छैन र अझै पनी अनुहार ढाल को एक मास्क मास्क को आवश्यकता छ। अमेरिकन एयरलाइन्स मा, उनीहरु मास्क को अनुमति दिदैनन् जो ट्यूबिंग वा ब्याट्री संचालित फिल्टर संग जोडिएको छ।
अमेरिकी यातायात सुरक्षा प्रशासन (TSA) जनवरी २०२१ मा हवाईजहाज र एयरपोर्ट सहित सबै सार्वजनिक यातायात मा यात्रा गर्दा अनिवार्य अनुहार मास्क आवश्यकता जारी गरेको थियो। यो जनादेश सेप्टेम्बर १३, २०२१ मा समाप्त हुने थियो, तर कोभिड १ cases मा डेल्टा भेरियन्ट्स को कारणले, जनादेश १ 18 जनवरी २०२२ सम्म चलाउन को लागी विस्तार गरिएको छ.
डेनियल तोप भन्छन्:
अगस्त २,, २०२० ० 20::2021
डाटा मा छ। मास्क काम गर्दैन! डर छोड्नुहोस्।
विज्ञान को पालन गर्नुहोस्!
प्रदूषित महासागर बनाउँछ, ब्याक्टेरिया संक्रमण को कारण जब प्रयोग र अपराधीहरुको रक्षा!